नयाँ समीकरणका लागि निधिको सक्रियता, के भत्किएला त कांगेस नभित्रको परम्परागत गुठ ​? «
नयाँ समीकरणका लागि निधिको सक्रियता, के भत्किएला त कांगेस नभित्रको परम्परागत गुठ ​?
प्रकाशित मिति : ७ असार २०७८, सोमबार १७:५७
काठमाडौँ — कांग्रेस उपसभापति बिमलेन्द्र निधिको पहलमा उनकै निवास बानेश्वरमा महामन्त्री शशांक कोइराला र पूर्व महामन्त्री प्रकाशमानबीच छलफल भएको छ। कांग्रेसको आसन्न १४ औं महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवारी बन्ने तयारी गरीरहेका तीन नेताहरूले सोमबार संयुक्त लञ्च बैठक गरेका हुन।
निधिले १३ औं महाधिवेशनमा जनाएको प्रतिबद्धता र सरकारको नेतृत्वका लागि अघि बढिरहेको परिदृश्यमा सभापतिको उम्मेदवार आफूलाई बनाएर सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । देउवाले आफूले नछोड्ने बताएपछि निधिले संस्थापन र इतर दुवै पक्षका नेताहसँग भावी समीकरणको बिषयलाई लिएर छलफल अघि बढाउन थालेका छन ।
नेतासँग समेत छलफल गरेर अघि बढ्ने जनाएका छन । ‘अहिल्यै कस्तो समीकरण बन्ने भन्नेबारेमा कुनै समझदारी बनिसकेको छैन । छलफलकै क्रममा छौ,’ निधि निकट स्रोतले भन्यो,‘सबैसँग छलफल गरेपछि त्यसबारेमा ठोस समझदारी गर्ने प्रयत्न हुन्छ ।’ अबको बैठक क्रमशः सिंह र कोइराला निवासमा बस्ने तय भएको छ ।
निधिले सोमबार अपरान्ह चन्द्र भण्डारी, गगन थापा, प्रदीप पौडेलसहितका नेताहरूसँग एक पार्टी प्यालेसमा छलफल गर्ने तयारी गरेका छन । उनले बरिष्ठ नेता पौडेल, पूर्वमहामन्त्री सिटौला, केन्द्रीय सदस्य बलबहादुर केसीसहितका नेताहरूसँग पनि छलफल गरिरहेका छन । लामो समय देउवा कोटरीमा रहेका निधिले परम्परागत गुट भत्काएर दुवै पक्षका नेताहरूको सहयोगमा आफू अघि बढ्ने रणनीति बनाएको बताउने गरेका छन ।